Rosia: Vavahadin-tserasera Iray Niharan’ny Fanarahamaso Momba Ny Ekstremisma · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2018 14:01 GMT
fangon'ny Grani.ru, tranonkala Grani.ru
Lasa rafitra manerantany ampiasain'ny manampahefana Rosiana hiadiana amin'ny fahalalahana maneho hevitra an-tserasera ny ady amin'ny ekstremisma. Tamin'ny 11 Febroary, nanomboka nanao fanaraha-maso [RUS] tamin'ny tranokalan'ny mpanohitra Grani.ru ny polisy, miezaka mamantatra raha mampiroborobo ny ekstremisma ny tranonkala. Grani.ru dia fanta-daza ho sehatra misokatra ho an'ireo mpanao gazety liberaly sy mpikatroky ny zo sivily. Tohanan'ilay mpanefoefo any antsesintany Boris Berezovsky [ENG] ny tranonkala.
Mampiseho ny politika momba ny “Ady amin'ny Mahery Fihetsika” vao haingana ity tranga ity. “Natomboka” tamin'ny taona 2006 ary lasa niparitaka be nandritra ny fitondrana voalohan'ny filoha Dimitry Medvedev ny politika. Mihamaro hatrany izany, ary ampiharina amin'ireo media anaty aterineto.
Nametraka ny Departemantan'ny Ady amin'ny Mahery Fihetsika na anti-ekstremisma (antsoina hoe ‘E’-Centers’) tamin'ny septambra 2008 ny Filoha Dmitri Medvedev. Ny teny hoe “ekstremisma” dia voafaritra tsy dia mazava tsara amin'ny fihetsiketsehana 18 [RUS] (ao anatin'izany ny fitarihana fikorontanana sivily sy fanalam-baraka manam-pahefana). Manome fahafahana ho an'ny manampahefana mba handika izany araka izay tiany ity famaritana midadasika ity. Nandritra ny taona 2009, ohatra, heloka bevava 548 no nofaritana ho ekstremisma, mitatittra ny Grani.ru .
Mahatsiaro ho lasibatra amin'ny famaritana midadasika an'ity fepetra ity ireo mpikatroka sy ny vondrona iray manontolo. Namoaka ny lisitry ny votoaty ‘mahery fihetsika” an-tserasera, izay ahitana zavatra 490 ary tsy mitsaha-mitombo ny biraon'ny mpampanoa lalàna. Hatramin'ny nampidirana ny didim-panjakana, nanizingizina hatrany mba hanova ny famaritana ny mahery fihetsika ary ny fandravana ny “E”-Centers ireo mpikatroky ny zon'ny sivily.
Nanomboka tamin'ny antso an-tariby avy amin'ny solontenan'ny “E”-Center ao an-toerana Alexander Skripnikov ny fisavana vao haingana natao tamin'ny Grani.ru. Nangataka fihaonana manokana tamin'ny talen'ny tranonkala izy ary nitaky antontan-taratasy manamarina fa voasoratra anarana ofisialy ny tranonkala (fanao mahazatra ho an'ireo media an-tserasera any Rosia). Nanambara ihany koa ny solontenan'ny “E”-Center fa atao fanadihadiana ny tranonkala noho ny hetsika voalaza fa mitrifana. Tsy nety nihaona taminy manokana ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra sy ny talen'ny Grani.ru ary nangataka valinteny ofisialy avy amin'ny manampahefana izay nomena ny biraon'ny tranonkala ny ampitso.
Nandritra ny fisavana, mikasa hanasazy ny tranonkala ny biraon'ny polisy sy ny mpampanoa lalàna raha toa ka ahitana antso ho an'ny fifandirana ara-poko na mampiroborobo ny fanovàm-pitondrana ny lahatsoratra avoaka tao amin'ny tranonkala. Fanindroany izao no nohadihadian'ny manampahefana ny Grani.ru noho izy voalaza fa mamoaka votoaty mahery fihetsika. Ny fanadihadiana voalohany dia natao tamin'ny taona 2007-2008 ary natao hikendrena ny mpanoratra ao amin'ny Grani.ru Andrey Piontkovsky [EN], Rosiana mpahay siansa sady mpanoratra politika.
Tamin'ny antsafa tao amin'ny “Ezhednevny Zhurnal” [RUS], Vladimir Korsunsky, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Grani.ru, naneho hevitra mikasika ny toe-draharaha:
Mitantana politikam-baovao mahalala onony sy voalanjalanja tsara ny “Grani.ru”. Raha afaka mitantana politika mifandanja kokoa noho izy isika, dia lasa tsy mety intsony izany. Mbola tsy mazava tsara ny momba ity toe-javatra ity. Tamin'ny voalohany ry zareo te-hihaona aminay ary niresaka taminay tsy ampahibemaso. Mihaona sy miresaka fotsiny. Momba ny inona – tsy fantatray. Izany no antony tsy maintsy nandavanay. Tsy namana ry zareo. Raha manan-javatra ho anay izy ireo, dia tokony hanoratra aminay amin'ny fomba ofisialy, ary hamaly izahay. Tena resy lahatra aho fa tokony hifanaraka amin'ny lalàna ny fifandraisana toy izany. Tsy azo atao ny mifampiresaka amin'ny polisy. Indrindra rehefa tsy milaza izay tiany atao izy. Mieritreritra aho fa mitady zavatra toy izao izy: miteny zavatra ianao mandritra ny resaka, ary avy eo izy hilaza aminao hoe “Aha, izay no tiako hamarinina aminao!” Avelao ry zareo hilaza ny zavatra tadiaviny.
Mahagaga fa miaraka amin'ny tetikasam-panavaozana apetrak'i Medvedev (toy ny “Silicon Valley” Rosiana) ny sivana ety anaty aterineto sy ny fitomboan'ny fifehezana ny aterineto. Saingy azo atao ve ny mamorona fiarahamonina mifototra amin'ny fanavaozana tsy misy fahalalahana miteny? Tahaka ny hoe mihevitra zavatra tsara sy manome aingam-panahy sady koa mampijaly sy manameloka ireo mpamatsy vaovao tsy miankina izany.